Fanampiana ny kaominina: takina ny fahaiza-mitantana sy ny mangarahara | NewsMada
Fanampiana ny kaominina: takina ny fahaiza-mitantana sy ny mangarahara
Nanao tatitra ny fiarahamonim-pirenena Rohy, omaly teto an-dRenivohitra, momba ny fampiasan’ny kaominina ny vola nomena ho fanampiana azy ireo. Fanampiana avy amin’ny Banky iraisam-pirenena, tafiditra ao anatin’ny tetikasa PAPSP* sy ny fandaharanasa fanatsarana ny fitantanan-draharaham-panjakana (Prea)*. Miainga avy ao amin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny fanatanterahana izany amin’ny alalan’ny Tahiry ho an’ny fampandrosoana ifotony (FDL)*.
1 695 ny kaominina manerana ny Nosy ; nahazo famatsiam-bola 15 tapitrisa Ar avy ny 992 amin’ireo, rehefa nahafeno ny fepetra ara-dalàna. Takina, ohatra, ny tsy maintsy fananan’ny kaominina mpitantambola matihanina, ankoatra ny tetikasa aroso sy ny ho fiantraikan’izany amin’ny mponina.
200 ny kaominina nanaovana fanadihadiana tomban’ezaka, avy amin’ny tamberin’andraikitra takina aminy, ny fangaraharana teo amin’ny fitantanana, ny fampahafantarana ny tolotrasa, ny fanaraha-maso ny fanatanterahana ny asa. Amin’ny ankapobeny, afa-po ny vahoaka, nahazo salanisa tsara ireo toerana nanaovana fanadihadiana, nahitana tetikasa nipaka amin’ny fiainam-bahoaka.
Ny maro anisa, 73 %, nandrafitra ny tetikasany, ankoatra izay ireo tsy manana izany na tsy namaly ny fanadihadiana nataon’ireo mpanao tomban’ezaka. Notantanan’ny teknisianina ny 43% tamin’ny tetikasa. Misy ireo nahavita ny tetikasany mihoatra ny tetibola 15 tapitrisa nomena azy, noho ny fananana mpiara-miombon’antoka na fanampiny avy amin’ny volan’ny kaominina manokana. 14 %, tsy nahitana tetikasa natomboka, ankoatra ireo tsy nahavita ny tetikasany hatramin’ny farany.
Kely loatra ilay 15 tapitrisa Ar
Na tsara aza ny vokatra amin’ny ankapobeny, fantatra fa mbola maro ireo kaominina tsy mahalala ny fisian’ny famatsiam-bola toy izao, noho ny antony maro. Tsy tonga any ambanivohitra any ny vaovao tokony ho fantany, tsy misy tambajotra ahazoana mifanerasera amin’ny FDL. Tanjona ny hampaleo tena ny kaominina nefa mbola mila ezaka goavana ny fananganana fotodrafitrasa fototra ataon’ny fanjakana foibe, tsy zakan’ny tetibolan’ny kaominina mihitsy. Izany 15 tapitrisa ariary izany, ampahany kely fotsiny amin’ny volam-bahoaka lanin’ny mpitondra fanjakana ambony iray : fiarakodia, vidin-tsolika, fandehanana any ivelany, karama, tambin-karama, mpiambina …